Xildhibaano kahor jeestay Golihii Wasiirada uu dhowaan magacaabay Madaxweyne Shariif Xasan – Balcad.com Teyteyleey
Xildhibaano kahor jeestay Golihii Wasiirada uu dhowaan magacaabay Madaxweyne Shariif Xasan
By Abdi Malik	 On Aug 5, 2017
Magaalada Baydhaba waxaa maanta ka dhacay kulan ay yeesheen Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyagoona mowqif mideysan ka qaatay Golaha Wasiirada ee uu dhowaan magacaabay Madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Sheekh Aadan.
Golaha Wasiirada cusub oo la filayo maalinta Isniinta ah in la hor geeyo Golaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed ayay sheegeen Xildhibaanada maanta kulanka ku yeeshay magaalada Baydhaba inaysan ansixin doonin.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada kulanka ka qeyb galay ayaa sheegay inay sharci darro tahay magacaabista Golaha Wasiirada ee uu ku dhawaaqay Madaxweyne Shariif Xasan, iyagoona sheegay inaan lagu soo xulin saami qeybsiga beelaha degan gobolada uu maamulkaasi ka arrimiyo.
Xildhibaan Cusmaan Macallim, Xildhibaan Cali Xasan Cusmaan iyo Xildhibaan Maryan Keyf Xasan oo khudbad ka jeediyay kulanka ayaa sheegay inay dib ugu celinayaan Madaxweyne Shariif Xasan Golaha Wasiirada oo ay tilmaameen inay kuwo hareer marsan dastuurka maamulka Koonfur Galbeed.
Mudanayaasha Baarlamaanka Koonfur Galbeed ee maanta kulanka ku yeeshay magaalada Baydhaba oo tiradoodu gaareyso ilaa 50-Xildhibaan ayaa u muuqda kuwo miisaan siyaasadeed ku leh Golaha Baarlamaanka dhexdiisa, iyadoona laga cabsi qabo inay helaan aqlabiyadda codka diidmada ah ee Wasiirada cusub.
fadlan like saar boggeena facebook : Ilwareed Online
The post Xildhibaano kahor jeestay Golihii Wasiirada uu dhowaan magacaabay Madaxweyne Shariif Xasan appeared first on Ilwareed Online.
Al-Shabab Militants Kill Provincial Governor in Mogadishu
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo furay tartanka kubadda cagta dagmooyinka